မောင်ငွေဘောရဲ့ ဒိုင်ယာရီ : ကွပ်လပ်များကို...............?
အမှတ်တမဲ့ များရဲ့ အမှတ်တရများ...............။
အင်း........အမှန်တော့ဒီစာ ဘလော့ဂ်လေးက ရွာစာကြည့်တိုက်အတွက်ဆိုပြီး...ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာ..အစကတော့ ဒီဘလော့ဂ်နာမည်လေးကို လောကပြတင်း လို့ပေးမယ့်ပေါ့။ လောကပြတင်းစာကြည့်တိုက်ကို အစွဲပြုပြီးဖွင့်တဲ့ဘလော့ဂ်လေးဖြစ်နေလို့။။လောကပြတင်းစာကြည့်တိုက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်လေးတွေသိမ်းထားမယ်။ အလူ့ရှင်မှတ်တမ်းတွေပြိးရင်.....ရွာအကြောင်းလေးတွေရေးမယ်ပေါ့။ ရွာကိုအလွမ်းပြေ၊အမိကိုအလွမ်းပြေ၊
အဖကိုအလွမ်းပြေ.......အင်းဒီအတိုင်း ကိုယ်ခံစားရတာတွေ၊ ကိုယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်း....ပါနေမှာဆိုတော့....လောကပြတင်းစာကြည့်တိုက်အစား......
မောင်ငွေဘောရဲ့ဒိုင်ယာရီ လိုပဲခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်ရတယ်..............ဒိုင်ယာရီဆိုတဲ့အတိုင်း နေစဉ်ထိတွေနေတာလေးတွေ....
ဆိုတဲ့သီချင်းလေး.......ပို့စ်လုပ်ဖြစ်သည်။..................ယခုလည်း...ဖတ်မိတာလေးကိုပို့လုပ်လိုက်သည်။ (ကို)နေဘုန်းလတ် www.nayphonelatt.com ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် စာအုပ်မှဖြစ်သည်။........ သက်ရှိကွက်လပ်များ..........
တာမွေလိုင်းကားက စပယ်ယာ ........အလုပ် လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေအကြောင်း........ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်မှာဆိုရင်တော့ ပန်းခိူးပန်းေ၇ာင်း....ကောက်စိုက်.....ပေါင်းနုတ်..........ပေါင်းသင်......ဟိုဘက်အစွန်မှာလည်းကလေးလေးတွေ
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျောင်းကနေဟိုအဝေးကြီးမှာရှိနေကြမည်။..............(ကို)နေဘုန်းလတ်ရဲ့ ကဗျာလေးကို ရွတ်ရင်း.....ဆုတောင်းရသည်....ပန်းတိုင်းပွင့်ကြပါစေ။
တာမွေ တာမွေ တစ်ယောက် ၁၅၀ ပဲတဲ့
ငွေစတွေကသာ မင်းတို့ဘ၀တွေရဲ့ တည်ဆောက်ရာပေါ့
အသေမှတ်ထားတဲ့ ဈေးတွက်နဲ့ တွက်
ဆရာ၊ ဆရာမတွေက မင်းတို့ကို မျှော်နေတယ်
မိူိးဆက်သစ်တွေရဲ့ လက်ထဲကို အပ်ဖို့
ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် www.nayphonelatt.com သက်ရှိကွက်လပ်များဆောင်းပါး....မှ။
Posted by မောင်ငွေဘော at 8:03 PM
ကျနော်၏ ရောက်တတ်ရာရာများ (4)
မောင်ငွေဘော. Simple theme. Powered by Blogger.